निर्मला पन्त « Janata Samachar
निर्मलाको आमाले भनिन्, छोरीको हत्यारा त्यही हो (भिडियोसहित)
काठमाडौं । साउन १० गते कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कार अनि हत्या भएको हो । यो घटनामा अपराधी पत्ता नलाग्दा अनुसन्धानमा दक्ष मानिएको नेपाल प्रहरीसमेत आलोचित बनेको छ ।
पत्रपत्रिकामा आज : निर्मला पन्तकी आमाले नै बयान फेरिन्
काठमाडौं । आज राजधानीबाट प्रकाशित विभिन्न अखबारहरुले फरक फरक समाचारलाई प्राथमिकताका साथ छापेका छन् । कान्तिपुर दैनिकले सरकारले ल्याएको बहुप्रचारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा रोजगारदाता हिचकिचाएको खबरलाई आफ्नो प्रथम पृष्ठमा छापेको
निर्मलाको घर पुगेर देउवाले गरे यस्तो खुलासा
धर्मराज कठायत कञ्चनपुर । पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्मलाको हत्यारा छिट्टै पत्ता लाग्ने बताउनुभएको छ । शुक्रबार बिहान बलात्कारपछि हत्याभएकी निर्मला पन्तको घरमा पुगरे निर्मलाकी आमा
निर्मलाको डीएनए किन पठाइँदैछ अमेरिका ?
काठमाडौं । बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको डिएनए परीक्षणका लागि अमेरिका पठाइने भएको छ । प्रहरी उच्च स्रोतका अनुसार डीएनएको वैधानिकतामै प्रश्न उब्जिएपछि विश्वसनियताका लागि डीएनए अमेरिका पठाउने
निर्मला प्रकरण : ‘अपराधी पत्ता लाग्न अझै समय लाग्छ’
काठमाडौं । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या गर्ने अपराधी पत्ता लगाउन समय लाग्न सक्ने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभा बैठकमा बुधबार सांसदका प्रश्नको जवाफ दिँदै थापाले सरकार हत्यारा पत्ता
काठमाडौं । निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याका मुख्य अभियुक्त पत्ता लगाउने मुख्य प्रमाण भनिएको डीएनए परीक्षणको प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण भएको आशंका गरिएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोलीले तयार
खेम बम काठमाडौं । कञ्चनपुरको भिमदत्त नगरपपालिका उल्टाखामकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको साढे पाँच महिना बितेको छ । हत्याराको अझै पहिचान हुन सकेको छैन । गृह
निर्मलाकी आमा दुर्गामाथि घाँटी च्याप्दै हातपात !
खेम बम काठमाडौं । कञ्चनपुरको भिमदत्त नगरपालिका उल्टाखामकी निर्मला पन्तका बुवा यज्ञराज पन्त र श्रीमती दुर्गादेवीबीच विवाद भएको छ । उनीहरुबीच राहत रकम र रगतको नमुना संकलनको बिषयलाई लिएर विवाद
निर्मला हत्याकाण्डः दुर्गाको रगत जाँच गरिँदै
काठमाडौं । कञ्चनपुरको भिमदत्त नगरपालिका उल्टाखामकी निर्मला पन्त हत्या रहस्यमय नै छ । राज्यबाट भएका ठूला अनुसन्धानले पनि दोषीलाई कानुनी कड्घेरामा उभ्याउन सकेन । धेरै निर्दोष व्यक्तिहरुमाथिको अनुसन्धान अन्ततः फेल
निर्मला प्रकरण : आठ प्रहरीलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाउन निर्देशन
काठमाडौं । बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या घटनामा लापरबाही गर्ने आठ प्रहरीविरुद्ध मुद्दा चलाइने भएको छ । अनुसन्धानमा प्रमाण नष्ट गरेको र निर्दोष व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर यतना दिएको आरोपमा आठ